Saturday, 04.04.2020, 01:41am (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 08.14.2013, 12:21pm
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरालाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनेन । अहिले फेरि संविधानसभाकै निर्वाचन गर्न लडाइँ भैराखेको छ । निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने टुंगो छैन । अब हुने राम्रो–नराम्रो सबै कुराको जस–अपजस यिनै पार्टीहरुले लिनुपर्छ । हामी सबैले देखिराखेका छौं कि हाम्रो देशबाट निकास निस्कदैन भनेर ।
Tuesday, 08.06.2013, 07:57am
वि.सं. २०५० सालसम्म सोमेश्वरमा कालिका मन्दिरको भग्नाबशेष मात्र थियो । खैरहनीका निलकण्ठ सापकोटाले २०५० सालमा सो मन्दिर निर्माण गरे । मन्दिर निर्माण भएपछि भारतीय श्रद्धालुहरुको भीड लाग्न थाल्यो । २०६२ सालपछि भारतीय सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना भएपछि छापा र तरंग माध्यममार्फत सो क्षेत्र भारतको भएको प्रचार गर्न थालियो । सरकारी योजनामा भारतीय चाप बढ्दै गयो । २०६६ सालमा नेपाली पुजारी निलकण्ठ सापकोटालाई हातपात गरेर लखेटियो । भेटी लुटेर भारतीयले लगे । नेपाल झल्काउने सबै लेखोट, झण्डा, फलक नष्ट गरे ।
Tuesday, 07.30.2013, 03:32pm
२०६२।०६३ को आन्दोनपछि त्योबेलाको शक्ति माओवादीलाई प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित गराए । जवकि त्यतिबेला उनीहरूको सांगठनिक संरचना बलियो थिएन । अहिले परिवर्तनको सट्टा मुलुक यथास्थितिमा रुल्मुलिइरहेको छ र यसले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लगिराखेको छ । यथास्थितिको विरुद्धमा परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाल देखापरिराखेको छ । हामीले पुरानो व्यवस्था फर्काएन खोजेका होइनौं, हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र खोजेका हौं ।
Wednesday, 07.24.2013, 12:39pm
सभासद बनेर आउदा मलाई शान्ता लेख्न पाँच मिनेट लाग्थ्यो । नेतृ शान्ता अधिकारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा हात समाएर सही गर्न लगाउनु भएको थियो । यसको प्रेरणाको स्रोत मेरो आफ्नो पीडा नै हो अनि अरुको व्यवहार पनि । यिनै दुईटा कुराको इख, जसले मलाई पढ्न लेख्न सिकायो । त्यस्तो अवस्थाबाट आएर, चार वर्षको अवधिमा किताव लेख्न सक्ने भएकी छु ।
Tuesday, 07.09.2013, 08:41am
रेग्मी सरकार उत्तम विकल्पको रुपमा आएको हैन । यतिबेला रेग्मी सरकार कहाँबाट कसरी आयो त्यो महत्वपूर्ण रहेन । रेग्मी सरकार हटेपछि अर्को सरकार बन्दैमा निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने पनि होइन । अर्को सरकारलाई कसैले मान्छौं, कसले मान्दैनौं भन्ने विवाद पक्कै उठ्छ । उहाँहरूको सैद्धान्तिक कुरा जनतामा लिएर जानुपर्छ त्यसैले निर्वाचनमा आउनैपर्छ । उहाँका मुद्दाहरूले जनसमर्थन पाउँछन् भने त्यसलाई जनमतबाटै अनुमोदन गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो ।
Friday, 07.05.2013, 07:20pm
अब हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा भाग नलिने दिशातिर नै गएको छ । अहिले धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ पनि यो निर्वाचनलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो । वहिष्कार गर्नुको अर्थ चुप लागेर चुनावमा भोट नहालेर वहिष्कार गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ ।
Wednesday, 06.26.2013, 12:18pm
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद
Wednesday, 06.12.2013, 12:15pm
सिमा मिचिएको कुरा मात्र हैन, सीमा सुरक्षासंग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरूमा नेपाली पक्ष मौन रहँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको कुरा सिमांकनसंग गाँसिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सिमांकन राम्रोसंग नहुँदा अपराधीहरूले पनि सहजै प्रवेश गर्न पाइरहेका छन् ।
Wednesday, 06.05.2013, 02:48pm
Tuesday, 05.28.2013, 08:08am
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेले । चार राजनीतिक दलको संयन्त्रको नाममा ती पार्टीका केही नेताहरूमा आफ्नो पार्टीभित्रका निर्णयका बिरुद्ध जाने प्रवृत्ति र संस्कार देखियो । यसले झनै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न ग¥यो भन्ने मान्यता नै स्थापित हुँदै आइरहेको छ ।
Tuesday, 05.21.2013, 07:52am
३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ चाहिने कुनै आवश्यकता नै छैन । सीमित स्रोत र साधन भएको मुलकमा ६०१ जनाको भारी बोकाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने सोच नै राष्ट्रिय हित विपरीत हो । मैले शीर्षस्थ बैठकहरूमा पनि नेपालको निम्ति संसदको निर्वाचनमा १५० भन्दा बढीको गर्नुहुन्न भन्ने गरेको छु । यो मेरो दृष्टिकोण फेरि पनि राख्छु । अहिले संविधान निर्माण प्रयोजनका लागि, इतिहास निर्माणको प्रक्रियाका लागि पाँच वर्ष अवधि भएको संसदको निर्वाचन जस्तो नभएकाले र भावी पुस्तालाई राज्य संचालनको दस्तावेज कस्तो दिने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले ४९१ मा सहमति भएको हो ।
Tuesday, 05.14.2013, 02:29pm
मुलुकको राजनीति, स्वाधीनता र राष्ट्रियता दिनानुदिन खतरामा पर्दैगएको छ । पछिल्लो समयका घटनाले भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सको चलखेल छताछुल्ल भएको छ । मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता नै समाप्त हुने अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा संविधानसभा–२ को चर्चा गर्ने कि मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बहस थाल्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
Tuesday, 05.07.2013, 07:57am
हिजो जसरी जातीय राज्य, एक मधेश एक प्रदेशको कुरा अगाडि आएको थियो भाषिक संघीयता त्यसको अर्को रुप मात्र हो । नेपालमा केही ठाउँमा बाहेक सर्वत्र नेपाली भाषा नेपाली जनताको माध्यम भाषा बनेको छ । सबै जातिको आफ्नो मातृ भाषा छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ, ती राष्ट्रिय भाषाहरू नै हुन् । लेखापढी गर्न सकिने भाषाहरूलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली भाषासंगै कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यस्तो अवस्थामा भाषाको आधारमा कस्तो राज्य बनाउने खोजिएको हो ? भारतले कस्तो खालको सुझाव दिएको हो ? भारत जस्तो सहयोगी छिमेकमा भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन ।
Monday, 04.29.2013, 07:17pm
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चारपटकसम्म कु गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूले त्यसलाई असफल बनाइदिएको अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मुलुकको राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै उत्पन्न गर्यो । यतिबेला मुलुकमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ र आगामी कार्तिक या मंसिरमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराउने तयारी भैरहेको छ । यस बीचमा राष्ट्रपति डा. यादव गत मंगलबार चार दिनका लागि आफ्नो जन्मथलो धनुषा पुगेर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको अप्रत्यक्ष रुपमाखण्डन पनि गर्नुभयो । यसै क्रममा बीबीसी नेपाली सेवाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसंग मंगलबार साँझ धनुषास्थित उहाँकै निवास एक अन्तर्वार्ताक लिएको थियो । त्यसैको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ :-
Monday, 04.29.2013, 07:15pm
यदि चुनाव हुने वातावरण बनेन वा चुनाव नै हुन सकेन भने कसले भाग लिन्छ ? अहिले हामी चुनाव गराउँछौं भन्ने दलहरूले पनि चुनाव हुनै सकेन भने के गर्छन् ? त्यस कारण चुनाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । चुनाव हुने अवस्था सिर्जना नगरेर कहीं चुनाव हुन्छ ? केवल हामीले चुनाव गराउन खोजेका थियौं तर फलाना फलाना दलले भाग नलिएर विथोलियो भनेर उम्किन खोज्ने जुन खालको राजनीतिक संस्कृति नेपालमा छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
Monday, 04.22.2013, 06:53pm
हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पैसाले पालिएका, नेताका गुनले बाँचेका हुनाले उनीहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र रहेर विद्रोह गर्न सक्दैनन् । साथसाथै ती पार्टीहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले विदेशीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दैआएका छन् । त्यसकारण जहिलेसम्म कुनै एउटा विदेशी शक्तिले भनेको जस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तवसम्म चुनाव हुँदैन । संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि त्यही हो । मैले माथि नै उल्लेख गरे जस्तो संविधान नबन्ने भए संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्न भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो ।
Tuesday, 04.16.2013, 07:48am
संघीय प्रणालीको प्राण भनेको प्रदेशको संख्या मात्र होइन । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण गर्ने हो । हरेक प्रदेशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आफ्नै निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय हुनुपर्छ । यो संघीयताको प्राण हो । त्यसैले संघीय प्रदेश प्रणालीको प्राण भनेको राज्य सत्ताको बाँडफाँड गर्नु हो । त्यसैले प्र्रदेशको संख्या भनेको तपिसलको कुरा हो ।
Monday, 04.01.2013, 06:58pm
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श�
Monday, 03.25.2013, 06:39pm
जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र जनताका बीचमा गएर परीक्षण हुन चाहन्न् उनीहरूलाई चुनावको प्रक्रियामा ल्याउने ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस अनुसार उनीहरूका कुराहरू अधिकतम् सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने बाटोबाटै हल गर्नुपर्छ ।
Monday, 03.18.2013, 05:24pm
» "कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली
» प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली
» लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला
» जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ �
» मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा,
» मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि�
» प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
» अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव
» हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
» राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
» कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ�
» परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त�
» धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह�
» अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण
» अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले
» सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले
» नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष्�
» नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा
» बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस�
» अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ�